अमेरिकाले नेपाललाई सहयोगस्वरूप दिने ५० करोड डलरमा बिहीबार हस्ताक्षर हुँदै – YesKathmandu.com
काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपाललाई सहयोगस्वरुप प्रदान गर्ने भनेको ५० करोड डलर अर्थात लगभग ५० अर्ब रुपयाँ बराबरको सम्झौतामा बिहीबार वासिंगटन डिसीमा हस्ताक्षर हुने भएको छ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट उपविदेशमन्त्री जोन जे सुलीभानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भएका हुन्। नेपालको दिगो विकासका लागि यो महत्वपूर्ण सम्झौता भएको र यसले देशको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास रहेको अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीले बताए।
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसिसी अन्तर्गत नेपाल यो सुविधा पाउने दक्षिण एशियाली क्षेत्रको एक मात्र देश हो । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट नाम दिइएको उक्त सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त गर्ने रकमले नेपालको गरिबी न्यूनीकरणका लागि र महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
तीन उपमहानगरमा एमाले संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको अग्रता
के किसानलाई अग्र्यानिक चिया उत्पादन गर्नका लागि सरकारले देला त अनुदान ?
भारतीय संरचनाको धार्मिक संगठन बनाउँदै राप्रपा
डेढ अर्ब घोटाला काण्ड राष्ट्र बैंकले लुकायो, सिआइवीले समायो
दुइतिहाइका लागि ४८ मत नपुगेपछि संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत
चालकसहित ट्रक त्रिशुली नदीमा खस्यो
देउवालाई एकलौटी ढङगले अघि नबढ्न पौडेल समुहको चेतावनी
सुरु भयो आइजीपी बन्ने दौड, कसले मार्ला बाजी ?
देउवा भन्छनन् भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप विश्वकै लागि चुनौती
भारतीय रुपैया प्रतिबन्धले सेयर बजारमा पहिरो